बीबीसीका पत्रकारले देश छाेडेपछि चीन किन आक्राेशित ?
बीबीसीका पत्रकार जोन सडवर्थले चीन छोडेका छन्। झुटो समाचार लेखेको आरोप लागेपछि उनले देश छोडेको बताइएको छ। पत्रकारले भने आफूले असुरक्षाका कारण चीन छोडेको बताएका छन्। उता, चिनियाँ प्रवक्ता चुनयिङले भने पत्रकार जोनले अधिकारीहरूलाई कुनै सूचना नदिएको र औपचारिकता समेत पूरा नगरी देश छाेडेकाे बताएकी छन्।
बीबीसी संवाददाताले देश छाडेपछि चीनको ‘आक्रोश’
After the abnormal departure of John Sudworth from China's mainland, some people came together to put onafarce,atextbook example of how to shift the blame to the innocent party by distortion of facts and fallacy of composition. pic.twitter.com/wpuePQ4eNa
— Spokesperson发言人办公室 (@MFA_China) April 2, 2021
BBC reporter John Sudworth's departure without notification abnormal: Chinese FM - Global Times
China says BBC correspondent John Sudworth did not give prior notice before departure